Indlu Yokuqasha eNew Ranip, e-Ahmedabad
Real Estate Listings: » Residential homes » Apartments » IN » Gujarat » Ahmedabad » New Ranip » Indlu Yokuqasha eNew Ranip, e-Ahmedabad1
Ubukhulu (Sq Ft): 1755
Ifulethi elingu-3 bhk multistorey eliseNew Ranip, e-Ahmedabad. Inendawo eyakhelwe ngaphakathi ye-1755 sqft futhi iyatholakala ngokuqasha kuma-Rs. 17,000 ngenyanga. Kuyisakhiwo esilungele ukuhamba. Isiza sisondelene kakhulu nezinsiza zomphakathi ezahlukahlukene. Xhumana nathi ukuthola eminye imininingwane.